Vaovao Samihafa Archives - Page 196 sur 215 -
Filaminam-bahoaka:Nohamafisina ny fiaraha-miasa amin’ny vokovoko mena
17/12/2016 admintriatra 0
Notanterahina ny alakamisy 15 Novambra lasa teo, tamin’ny 09 ora maraina, ny fifanarahana sy ny fanaovan-tsonia nataon’ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka sy ny komity iraisam-pirenena momba ny vokovoko mena na ny CICR . Teny amin’ny efitrano fivorian’ny …Tohiny
Ankatoky ny fety:EFA MIFANARETSAKA NY MPIANTSENA
16/12/2016 admintriatra 0
Efa tena mifanaretsaka izay tsy izy ny mpiantsena etsy Analakely. Tsy ny tsenan’ny “guirlandes” sy ny hazo noely ihany no malaza fa mahasarika olona koa ny tsenan’ny “électromenager” . Ho an’i Baolai etsy Analakely, ohatra, …Tohiny
Augustin Andriamananoro:MIANDRY FITSARANA ENY ANTANIMORA
Tsy afa-bela. Tsy maintsy zakaina ny heloka natao. Naiditra am-ponja eny Antanimora vonjimaika ilay mpanao politika, mpikambana eo anivon’ny Mapar, Augustin Andriamananoro. Niakatra teny amin’ny fitsarana omaly mantsy ny raharaha taorian’ny fisamborana azy teny Itaosy, …Tohiny
Fanjonoana tsy ara-dalàna:SAMBO MIISA 30 NO AHIAHIANA
Sehatra iankinan’ny fihariana ara-toekarena ny sehatry ny jono ho an’i Madagasikara. Misahana ny 4.1% ao anatin’ny harikarena faobe izany ary mamelona olona hatramin’ny 550.000, ny 13% n’ny vokatra haondrana ihany koa dia avy amin’izay jono …Tohiny